पथरीशनिश्चरेलाई गिज्याउदै बिग्रीएका सि सि क्यामरा - Sainokhabar
होमपेज / नगर / पथरीशनिश्चरेलाई गिज्याउदै बिग्रीएका सि सि क्यामरा
पथरीशनिश्चरेलाई गिज्याउदै बिग्रीएका सि सि क्यामरा
बुधबार, असार ०४, २०७६ , साइनो खबर
सुरक्षा चुनौति वढ्दो, नगरपालिका स्थानीयको बाटो हेर्दै, ब्यापार संघ मैन, प्रहरी लाचार, मेयर साव ! नगरबासीले शान्तिको महसुश कहिले गर्ने ?
साइनो समचारदातापथरी/ मोरङको पथरी वजार क्षेत्रमा जोडिएका सिसि क्यामेराले काम गर्न छाडेका छन । स्थानीय चुनाव हुनु भन्दा पहिला पथरी ब्यापार संघका अध्यक्ष धनकुमार लामाङको पहलमा जोडिएको सि सि क्यामार बिग्रीएको बषै भैसक्दा पनि कसैको चासो बढेन । हाल ब्यापार संघले नयाँ नेत्रित्व पाएको पनि बर्षै बित्यो । जनप्रतिनीधी आएको पनि बर्षै बित्यो तर नगरको शान्ति शुरक्षामा कसैको चासो बढेन । पुरानै समितीले नगरको सुरक्षामा चुनैती बढेको भन्र्दै २ ओटा सि सि क्यामरा मर्मत गरि नगरलाई जिम्मात लगायो तर नगरपालिका नगमा शुरक्षा दिनुको सटा निदाएर बसेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नगर क्षेत्रमा एक पछि अर्को घटना घट्दै आएको छ । असामहिक मृत्युका घटनाले नगरवासीमा त्रास सृजना फैलिरहेका वेला भने वजारमा जोडिएका सिसी क्यामेरा चल्न छाडेका बहिनै बित्न लाग्दा नगर बेखवर छ ।
गत बैशाख २४ गते वाट सञ्चालनमा आएको क्यामेरा जडान भएको २ दिन पछि वन्द भएको हो तर हाल सम्म मर्मत हुन सकेको छैन । यता पछिल्लो २ महिनाको अवधिमा नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा गरेर ४ वटा शव भेटिएका छन् भने नगरको सुरक्षालाई मजवुत वनाउन जडान गरिएको क्यामेरा भने वन्द भएका छन् । सडकमा क्यमरा देखिन्छन् तर ति क्यामेराले कुनै रेकर्ड भने गर्न नसकेको पाइएको छ । क्यामराको निरिक्षण ईलाका प्रहरी कार्यालयले गर्दै आएको भएतापनि कार्यालय सम्म पु¥याईएको तारमा समस्या आएपछि जोडिएको २ दिन देखि क्यामराले काम गर्न वन्द भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले जनाएको छ ।
नगर क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था चुस्त बनाउन प्रहरीको विशेष सक्रियताकासाथ सवै पक्षको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै गत बैशाख २४ गते नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाको अगुवाईमा वसेको वैठकले निश्कर्ष निकालेको थियो । तर जडान भएको २ पछि काम गर्न छाडेको क्यामरा भने अझ सम्म मर्मत हुन सकेको छैन ।
बैशाख २४ गते नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोलाको अगुवाईमा बसेको सर्वपक्षीय वैठकले रहस्यमय मृत्यु प्रकरणले नगरमा छाएको अशान्तीलाई सवै मिलेर सहज बनाउन जोड दिएको थिए तर बैठकका निर्णन सबै ऐजेण्डामा मात्र सिमित भएका छन् ।
विगत ४ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने पथरीमा २ वटा रहस्यमय मृत्यु रिना वस्नेत र षडराज तामाङको भएको छ । भने बैशाख देखि विगत २ महिनाको अवधिमा ४ वटा शव भेटिएका छन् । यसरी जडान गरिएका सिसी क्यामेराले काम गर्न छाडेको यतिका दिन भैसक्दा पनि स्थानिय सरकार र सरोकार वाला पक्ष भने मौन रहेको छ ।
अझ रोचक त नगरपलिकामा कर्मचारीको निगरानी गर्न जोडिएका कति सि सि क्यामरा नचलेको देखिन्छ । त्यसमा पनि “कहि नभएको जात्रा हाडि गाँउमा भने झै” नगर प्रमुख र उप प्रमुखको कक्षमा जोडिएको क्यामराको निगरानी प्रमुख प्रशासनीक अधिकृतले गर्ने गरेका छन । उपप्रमुखको कक्षको जोडिएको सि सि क्यामरा त तार खुस्काएको देखिन्छ । कर्मचारीको निगरानी गर्ने कर्मचारी नै भएकाले होला कर्मचारीहरु कार्यलय समयमा सामाजिक संजाल, ग्याम र छोरा छोरी सहित रुमली रहेको देखिने गरेका छन ।